Habka Kululaynta Induction ee silig naxaas ah, silig bir ah, silig naxaas ah, iwm
In wax soo saarka ee silig bir, silig copper, silig naxaas ah, iyo birta ama kululaynta ulaha guga naxaasta, hababka daaweynta kulaylka ee kala duwan ayaa la adeegsadaa, sida sawiridda siligga, xanaaqa ka dib soo -saarka, demininta kulaylka ee shuruudaha gaarka ah, qabashada induction Ka hor intaan loo isticmaalin sida alaab ceeriin ah, iwm. Waxaa jira codsiyo badan oo hadda ku saabsan kuleylinta internetka oo leh xawaare degdeg ah, kala duwan heerkulka kala duwan, soosaarka awoodda saxda ah, iyo xakamaynta heerkulka ee fiilooyinka dhexroorka yar; markaa, habka kululaynta saxda ah waa qasab. Haysashada faa'iidada hawlgalka otomaatiga ah oo heer sare ah (oo ay kujirto dejinta dabacsanaanta waqtiga, heerkulka, awoodda), aaladda kuleylinta induction ee HLQ ayaa la ogaaday inay aad ugu habboon tahay dhammaystirka daaweynta kulaylka fiilooyinka iyo fiilooyinka. Awood u leh inuu aqbalo kontoroolka fog ee bilowga/joogsiga, dhammaystirka hagaajinta awoodda, shaqaynta 24 saacadood/maalin, qabashada wax soo saarka korantada degdegga ah, iyo samaynta mashiinka si dhakhso ah iyadoo la raacayo tilmaanta xakamaynta heerkulka, alaabtayada kululaynta induction waxay si fudud u buuxin kartaa shuruudaha kala duwan ee siligga hadda iyo kulaylinta fiilada.
Waa maxay siligga induction iyo kulaylinta fiilada?
Qalabka HLQ Induction Co wuxuu bixiyaa xalal dalabyo badan oo ka imanaya silsilado bir-bir ah iyo kuwo aan bir ahayn, naxaas iyo fiilo aluminium ah iyo kaariyeyaasha ilaa soosaarka fiber optic. Codsiyada aad bay u kala duwan yihiin oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, samaynta, been abuurka, daaweynta kulaylka, galvanizing, dahaarka, sawirka iwm heerkulka 10 darajo ilaa in ka badan 1,500 darajo.
Nidaamyada waxaa loo adeegsan karaa xalkaaga kululaynta oo dhan ama xoojin si kor loogu qaado wax -soo -saarka foornada jirta adigoo u dhaqmaya sidii kuleyliye. Xalalka kuleylinta kuleylinta ayaa caan ku ah isku -duubnidooda, wax -soo -saarkooda iyo hufnaankooda. In kasta oo aan bixinno xalal kala duwan, badankood waxaa loo habeeyay si loo buuxiyo shuruudahaaga gaarka ah. Horumarinta nidaamyada loo habeeyay baahidaada oo leh xalal la habeeyay waa takhasuska Qalabka Induction HLQ.
Codsiyada caadiga ah waxaa ka mid ah:
Qallajinta nadiifinta boostada ama ka saaridda biyaha ama dareeraha kaabisyada
Daaweynta dareeraha ama budada ku salaysan Bixinta xoog dammaanad sare iyo dhammayn dusha
Baahinta dahaarka birta ah
Kuleylinta hore ee soo -saaridda polymer iyo dahaarka macdanta ah
Daawaynta kulaylka oo ay ka mid yihiin: cadaadiska yareeya, dabaysha, daboolista, daboolid dhalaalaya, adkaansho, patenting iwm.
Ku-kululaynta hore-u-samaynta kulul ama foorjeerka, gaar ahaan muhiim u ah alaabooyinka qeexaya
Kuleylka kuleylka waxaa kaloo loo isticmaalaa kulaylinta, kulaylinta ka dib ama ku shubista silig macdan ah oo ay weheliso isku -xidhnaanta/foolxumaynta ee dahaarka ama gaashaanka ee alaabooyinka kala duwan ee fiilada. Codsiyada ka hortagga kuleylka waxaa ka mid noqon kara siligga kululaynta ka hor inta aan la soo dirin ama la soo saarin. Kuleylinta ka dib caadi ahaan waxaa ku jiri doona hababka sida isku -xidhka, nacasnimada, daawaynta ama qalajinta rinjiga, dhejiska ama alaabta dahaarka leh. Ka sokow bixinta kuleylka saxda ah iyo xawaaraha khadka tooska ah, awoodda wax soo saarka ee korantada kuleylinta induction waxaa lagu xakameyn karaa xawaaraha khadka ee nidaamka inta badan. HLQ waxay qaybisaa sahayda korontada kululaynta ee kala duwan oo loo isticmaali karo hababkaan.
QALABKA XIRIIRKA WIILKA
HLQ UHF iyo MF Taxanaha Nidaamyada Kuleylinta Induction waxay bixiyaan jaadad aad u ballaaran oo awood leh laga bilaabo 3.0 illaa 500kW, taas oo la xiriirta waxtarka farsamo ee dalabyo macaamiil oo kala duwan. Waxaa lagu naqshadeeyay awood haanta taangiga lagu hagaajin karo iyo transformer-ka wax-soo-saarka badan, HLQ Nidaamyada Kuleylinta Induction waa kuwo dabacsan oo lagu kalsoonaan karo si ay ula kulmaan xaaladaha wax-soo-saarka ee u baahan kululaynta siligga induction iyo qalabka kululaynta fiilada.
Categories Technologies Tags silsilad naxaas ah, qaadidda siligga birta, xajinta siligga, kuleylinta kuleylinta kuleylka, kuleylinta naxaasta naxaasta, induction cable cable copper, induction silig naxaas ah, kululaynta siligga birta, kululeeyaha siligga induction, kululaynta siligga induction, kululeeye silig, kululaynta siligga, Xalka kuleylka induction induction Post navigation